Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » UNWTO General Assembly Madrid na-aga nke ọma
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • trending Ugbu a • Mmanya & mmuo
Mmanya Spanish, nri Spanish na-atọ ụtọ na Eze bụ akụkụ na-atọ ụtọ nke ụbọchị mbụ.
N'echi a ga-amalite akụkụ dị oke mkpa nke Mgbakọ Ọgbakọ a.
Mgbe nri abalị Gala nke Eze Spain kwadoro, ndị nnọchi anya 1000+ sitere na mba 135, gụnyere ndị ozi 84 na ndị ozi maara ihe nọ na Madrid na-aga Mgbakọ Ọchịchị Worldwa Tourism Organisation (UNWTO).
N'ịbụ nke e mere atụmatụ maka Morocco, nwara ịkwaga Kenya, ma ugbu a na-aga n'ihu na Spain, mba UNWTO Host, ndị nnọchiteanya nke òtù mba ụwa na ndị na-ahụ maka ọha na eze ga-esonyere ndị ọrụ ọha na eze maka nnọkọ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nke mbụ a ga-enwe. kemgbe mmalite nke ọrịa na-efe efe, na ihe ọhụrụ, agụmakwụkwọ, na itinye ego dị elu na ebumnuche.
Wenezde bụ ụbọchị kachasị mkpa na-akpụzi ọdịnihu nke nzukọ na ikekwe njem nlegharị anya ụwa, na nkwenye ma ọ bụ enweghị nkwenye nke odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvili.
Dị ka nzaghachi nyere eTurboNews site n'aka ndị nnọchiteanya, nchegbu ndị akwụkwọ a welitere, nke World Tourism Network, nke abụọ bụbu odeakwụkwọ ukwu UNWTO bụ nke a maara nke ọma ma tụlee.
Naijirịa bụ onye odeakwụkwọ ukwu na-elekọta nke ọma dịka ụfọdụ mba ndị otu Executive, kemgbe edoro ya n'isi.
Kwupụta koodu mba ofesi maka nchekwa ndị njem nlegharị anya
UNWTO meghere ọgbakọ izugbe na nnọkọ ntinye maka koodu mba ụwa maka nchekwa ndị njem nlegharị anya.
Amalitere na nzaghachi maka mbelata ntụkwasị obi ndị ahịa nke ọrịa na-efe efe kpatara, koodu iwu akara ga-enye ụkpụrụ kacha nta na ikike ndị ahịa maka ndị njem nlegharị anya n'ọnọdụ mberede.
Emepụtara ya na mmekorita ya na mba ndị otu 98 na ndị mmekọ yana yana otu mba ụwa nke 5 na-abụghị ndị otu steeti yana ndị isi na-ahụ maka ngalaba nkeonwe.
Ozugbo UNWTO General Assembly nakweere koodu a, a ga-ewepụta koodu ahụ n'ihu Mgbakọ Mba Ndị Dị n'Otu na 2022 na ebumnuche ime ya Mkpebi.